Kuchengeta uye Kurara Kufuridzira | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
ngonono& kurara kufema
Kunyepera kurara kufema
Iwe Unonzwa Kuneta Mumangwanani Kunyangwe Kurara Kwakazara Husiku? Kuchengeta ngonono Kuchengeta Mumwe Wako Kumusoro Husiku?
Kuvhiringidza kurara kwekufema (OSA) chirwere chinowanzoitika chinokonzeresa uye kufema kumbomira panguva yekurara. Iko kumbomira kufema kunogona kuitika makumi matatu kana kupfuura paawa. Nekuda kweizvozvo, mhando yekurara inotambura, ichiita kuti varwere vanete masikati. Pamusoro pezvo, vadikani vehupenyu vanogara vachitambura zvakare sekurira uye kuramba vachirovera kunogona kumuchengeta akamuka uye kutora huipi pahupenyu hwake. Chisingaperi, chine ruzha, uye chichienderera mberi ngonono ndicho chiratidzo chinonyatsooneka chekutadza kufema kufema. Pakati pezuva, pane kuramba uchirara kubasa kana kutyaira. Unogona kukotsira kana usinga shande - pamberi peTV - kunze kwekuneta.
Zvimwe zviratidzo zvinosanganisira:
kumuka kazhinji husiku hwese
kuoma kuisa pfungwa
kushushikana kana kushanduka kwemanzwiro
huro huro kana kuoma muromo pakumuka
Kufutisa, kusvuta, uye kunwa doro zvakabatana nematambudziko ekurara. Kurera huremu uye shanduko yehupenyu inoenderana inogona kudzikisira kuomarara kwepnea. Uyezve:
Chinja nzvimbo yako yekurara inogona kubatsira (kubva pakurara nemusana kuenda kudivi-kurara, semuenzaniso
Wana kurapwa kweanorwara
Dzivisa zvinodzivirira uye mapiritsi ekurara usati warara
Imwe mhinduro chigadzirwa chemumuromo chinokweva shaya yepasi zvishoma kumberi. Aya majaira anoshanda nekukudza iyo yemhepo. Dzinoitawo kuti tsandanyama dzive dzakaringana kudzivirira zvinyoro zvinyoro kudonha nekuvharira nzira yemhepo. IAmerican Academy Yekurara Mushonga (AASM) yakabvumidza kurapwa-kwekushandisa senzira yekutanga kurapwa kwevarwere vanoonekwa vane hunyoro kusvika pakati nepakati OSA. IAASM inokurudzirawo zvishandiso zvemuromo kune varwere vane OSA yakaoma vasingakwanise kutsungirira kana kusakwanisa kupfeka dzimwe nzira dzekurapa. OPTISLEEP ndechimwe chakadai chigadzirwa-chakagadzirwa, uye chakafukidzwa nezvakawanda zvirongwa zveinishuwarenzi zvehutano. Vanoda kusvika makumi manomwe kubva muzana evarwere vanoonekwa kuti vane hutachiona hwekudzivirira kufema vanopindura zvakanaka kurapwa nemidziyo yemumuromo.¹
Yakanaka Mhepo Yekumanikidza Midziyo
Kurara nerubatsiro rwePositive Airway Pressure Machine kunogona kubatsira kudzikisira kusvika pakurara kufema kufema. Iyo michina yakagadzirirwa kuona kuti mweya unoyerera uchienderera mberi kana mukati-kati kupinda muhuro yeanorara, izvo zvinodzivirira iyo yekurara nzira yekudonha. Murwere anofanira kurara akapfeka chifukidzo chinokwana pamusoro pemhino nemuromo (mune zvimwe zviitiko).
Mhepo inonunurwa kuburikidza neyakagadziriswa chubhu kubva kune imwe yemhando dzinoverengeka dzemuchina:
CPAP (inoenderera yakanaka yakanaka yekumanikidza yemhepo)
BiPAP (bilevel yakanaka mhepo yekumanikidza)
VPAP (inoshanduka yakanaka mweya yekumanikidza)
Kusagadzikana inyaya kune vamwe vanhu, uye ndizvo chaizvo chikonzero nei vachirega kushandisa.
Kuvhiya kunowanikwa kune anovhiringidza kurara kufema kuti awedzere nzira yekumhepo kuburikidza nemhino kana huro izvo zvinogona kunge zvichidzivirira kumusoro kwemweya nzira. Kuvhiya kunowanzo sanganisira kubvisa kana kudzikisa zvinyama kubva mukuvhura, matoni, kakapfava mukanwa, adenoids, kana rurimi. Mune zvimwe zviitiko, kuvhiyiwa kunopa maxillomandibular kufambira mberi iyo inofambisa iyo yepamusoro uye yakadzika rushaya kumberi.
OPTISLEEP chishandiso chakagadzirwa-chemuromo kushandisa kuridza ngonono kana zvinyoro kusvika pakati nepakati zvinodzivirira kufema kufema. Inokurudzirwawo kune varwere vane OSA yakaoma vasingakwanise kana vasingadi kutsungirira kurapwa kweCAPAP uye / kana kuvhiyiwa. Chishandiso chemaviri-chakagadzirirwa kudzivirira maapneas nekuchengeta iyo yekumusoro nzira yakavhurika. Shaya yepasi inoendeswa kumberi zvakasununguka kuzorodza nyama iri kumashure kwehuro. Izvi zvinodzivirira hwaro hwerurimi kubva mukudonha uye kuvharira nzira yemhepo.
Nei Uchisarudza OPTISLEEP?
Zvinobudirira: 90% yevarwere vanonzi vakadzora ngonono uye kufemereka pavanenge vakapfeka mudziyo wemumuromo.¹ Zvinonyaradza: Iyo dhizaini yakanyanyisa inoita kuti kupfeka mudziyo kunyanye kugadzikana. Natural masisitimu: OPTISLEEP inobvumira varwere kuvhura uye kuvhara muromo wavo zvakasikwa. Yakakwirira mhando: OPTISLEEP mudziyo weChipiri II wekurapa, unogadzirwa uchishandiswa zvemhando yepamusoro uye 510 (k) yakacheneswa. Yakasarudzika-yakagadzirirwa: Iyo dhizaini dhizaini yeOPTISLEEP inobvisa kudiwa kwekusafadza maitiro uye inovimbisa yakakwirira nhanho yekururama. Yakanakisa inochinjika: OPTISLEEP inouya neanogona kuchinjika macomputer, ichibvumira yakakura-renji kufamba kweiyo yakadzika rushaya.
Mhedzisiro Kubva kuZvidzidzo
76% yevarwere vakataura kudzikiswa pakuneta kwemasikati kana vakapfeka mudziyo wemuromo¹
84% yevarwere vakataura kuvandudzwa kwehunhu hwekurara husiku kana vakapfeka mudziyo wemuromo¹
90% yevarwere vakataura kudzikiswa kwekusveta uye kufema kana vakapfeka mudziyo wemuromo¹